ကွက်ကိတ်နေတာက ဗိုက်များလား…………… - Hello Sayarwon
ဟဲလို……. Helloဆရာဝန်ပရိသတ်ကြီးရေ….. တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ကိတ်နေတာက ရင်လည်းမဟုတ်၊ တင်လည်းမဟုတ်ဘဲ၊ ဗိုက်များဖြစ်နေပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ပြီး ကွက်ကိတ်နေတဲ့နေရာလေးကို ကြည့်လို့အဆင်ပြေ အောင်လုပ်ပြီး စမတ်ကျကျလှလိုက်ရအောင်လား။
ပြောနေတော့တော့ ဟုတ်သလိုလို ဗိုက်ပူနေတာက ကြိုက်သူမပေါဘဲ ရောဂါတိုးမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဗိုက်အဆီကပ်နေ တာက ကိုယ်တွင်းကိုရောဂါတွေ အများကြီးဝင်လာစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရော သိရဲ့လား။ ဗိုက်အဆီကပ်တာက စားထားသောက်ထားသမျှရဲ့ ပမာဏကိုပြနေတဲ့ မြင်သာတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါ။ ဗိုက်ပူပူလေးက ချစ်စရာကောင်းတာက ဘေဘီလေးတွေနဲ့လေဒီဗိုက်လေးတွေမှာပဲ ချစ်ဖို့ကောင်းတာပါ။
ဗိုက်ပူမှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေက ဘာတွေများလဲ…..
ဗိုက်အဆီများနေတာက ရေရှည်မှာထိခိုက်မှုကြီးမားနိုင်ပါတယ်။ ဗိုက်အဆီများတာကြောင့်
• အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုရောဂါ
• အယ်လ်ဇိုင်းမားနဲ့ အခြားသော မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှုရောဂါတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဗိုက်အဆီကပ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းက တစ်ခုမကရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကရော ဘယ်နှခုလောက်များလုပ်မိနေလဲ တူတူကြည့်လိုက်ရအောင်။
အချိုများတဲ့အစားအစာတွေ၊ ပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေ၊ ဆိုဒါ အပါအဝင် အချိုများတဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်တွေ၊ သကြားလုံး၊ ရေခဲမုန့်ကစလို့ အချိုများတဲ့စားစရာတွေကိုစားတာ၊ ပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေကိုပဲစားနေတာမျိုးပါ။
အရက်အလွန်အကျွံသောက်တာက အသည်းအဆီဖုံးတာ၊ အသည်းရောင်တာအပါအဝင် ကျန်းမာရေးပြဿနာအမျိုးမျိုးကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဗိုက်ကအဆီတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေဖို့က လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ဖို့လိုပါမယ်။ လှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကလည်း ဗိုက်အဆီတက်စေနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးတဲ့အခါ ကိုယ်တွင်းမှာ ကော်တီစောဟော်မုန်းတွေထွက်လာပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းတွေက သွေးတိုးစေနိုင်သလို အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ဗိုက်အဆီကပ်နိုင်ပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက်တာက ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သလို ဗိုက်အဆီကိုလည်း တက်စေနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်တဲ့အခါ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တာတွေကို ပိုစားမိပြီး ဗိုက်အဆီပိုတက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်တာက ဗိုက်အဆီကို တိုက်ရိုက်တက်စေတာမဟုတ်ပေမယ့် ဗိုက်အဆီတက်အောင် သွယ်ဝိုက်တဲ့ နည်းနဲ့တော့ အားဖြည့်ပေးနေပါတယ်။
ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် သောက်သုံးနေရတဲ့ ဆေးအချို့ကလည်း ဗိုက်အဆီကို တက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဗိုက်ပူတာက အလှပျက်စေရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုက်မပူစေဖို့ ဒီအလေ့အကျင့်တွေကိုမွေးမြူကြဖို့ ပြောပါရစေ။
နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာ အဆီနဲ့အချိုကိုလျှော့စားပါ။ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးအနှံတွေကိုစားသုံးပေး ပါ။
အရက်တင်မဟုတ်ပါဘူး။ အယ်လ်ကိုဟောပါတဲ့ သောက်စရာတွေကိုလည်းလျှော့သောက်ပေးပါ။ အယ်လ်ကိုဟောနဲ့ သကြားဓာတ်ရောသောက်မိတာက ဗိုက်အဆီတက်စေနိုင်သလို လူကိုလည်း ဝစေနိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့တာမှာ အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ် နာရီဝက်လောက်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာက ဗိုက်အဆီကျစေနိုင်သလို ခန္ဓာကိုယ်လည်း ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။
မနက်ခင်းနေရောင်ခြည်ကို ခံပေးတာက ကိုယ်တွင်းဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို ကောင်းမွန်စေနိုင်သလို ကိုယ်တွင်းက အဆီပိုတွေကိုလည်း အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုက ကိုယ်အလေးချိန်ကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ထွက်လာတဲ့ ကော်တီစောဟော်မုန်းက အစားအစားချင်စိတ်ကို တချိန်လုံးဖြစ်ပေါ်ေနေစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရားထိုင်ပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေ့ကျင့် လုပ်ပေးပါ။ ယောဂလုပ်ပေးပါ။
ကောင်းမွန်တဲ့ အိပ်စက်မှုက ကျန်းမာရေးကို အများကြီးအထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပြီး ရောဂါတွေအန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေး နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်သလို အင်အားပြည့်ဝကျန်းမာစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ ပေးနိုင်တာကြောင့် ညတိုင်း အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ။
ဆေးလိပ်သောက်သုံးတာကလည်း ဗိုက်အဆီတက်စေဖို့ အားပေးနေတဲ့အချက်တစ်ခုပါ။ ကျန်းမာရေးကိုလည်း တော်တော်ထိခိုက်စေနိုင်သလို ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုက်အဆီကင်းပြီး ကျန်းမာတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။
How do you lose belly fat? https://www.medicalnewstoday.com/articles/323309.php Accessed Date 28 December 2019
Unhealthy Belly Fat:6Diseases Which Could Give You Unhealthy Belly Fat https://doctor.ndtv.com/living-healthy/unhealthy-belly-fat-6-diseases-which-could-give-you-unhealthy-belly-fat-1866859 Accessed Date 28 December 2019